अब सिरिया मुद्दामा विश्वले केही गर्नै पर्छ : एउटा खुला पत्र
Tue, Mar 19, 2019 | 13:26:56 NST
18:11 PM ( 1 year ago )
फागुन १६ – झण्डै पाँच वर्षदेखि युद्ध चलिरहेको सिरियामा अहिलेसम्म साढे ४ लाखभन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । राजधानी दमास्कससहित विभिन्न ठाउँमा सरकारी सुरक्षाकर्मी र विद्रोही संगठनबीच भिडन्त भएका समाचारहरु दैनिकजसो अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुमा आइरहेको छ । तर गएको एक हप्तादेखि फेरि सिरियामा चलिरहेको गृहयुद्धले एकाएक चर्चा पाएको छ ।
दमास्कस नजिकैको पूर्वी गुटा शहरमा विद्रोही र सरकारी पक्षबीच भएको भिडन्तमा ५ सय भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा धेरै बालबालिका पनि छन् । मानवीय सहायता पु¥याउने तथा सर्वसाधारणलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सुरक्षित ठाउँमा सार्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा युद्धविरामको सहमति पनि नभएको होइन । तर त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन । गुटामा अझै पनि बमबारी चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
सिरियामा चलिरहेको हिंसा नरोकिएपछि राष्ट्रसंघीय बाल कोष युनिसेफले गएको शुक्रबार एक वाक्यको विज्ञप्ति निकाल्यो । जसमा भनिएको थियो, सिरियामा युद्धमा भइरहेको बालबालिकाको हत्या, उनीहरुको आमा बुवा तथा आफन्तको हत्याको कुनै शब्दले न्याय नै गर्न सक्दैन । विज्ञप्तिसँगै रहेको एउटा नोटमा लेखिएको थियो –हामीसँग अब कुनै शब्द छैन जसले सिरियाली बालबालिकाको पीडा व्यक्त गर्न सकोस । के तिनीहरुसँग केही शब्द छन् जसले अवोध बालबालिकालाई पीडा दिइरहेका छन् ?
युनिसेफको यस्तो विज्ञप्तिपछि विश्वका विभिन्न देशका दुई सय जना प्राध्यापक, लेखक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले संयुक्त रुपमा खुला पत्र लेखेका छन् । विश्वले अब प्रतिक्रिया जनाउनैपर्छ । शीर्षकमा लेखिएको खुलापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद सिरियाको संरक्षणमा असफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वलाई खुला पत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघले सिरियामा भइरहेको हिंसामा आफू निःशब्द भएको बतायो तर हामी निम्न व्यक्तिहरु निःशब्द छैनौँ । हामीलाई विश्वका सरकार, सांसदहरु, शक्ति केन्द्रमा रहेका व्यक्तित्वहरुलाई भन्नुछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरुलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्ने गर्छन् ।
सिरियामा भइरहेको नरसंहार कसैबाट लुकेको छैन । यो सबै विश्वव्यापी दर्शकहरुको अगाडि भइरहेको छ र सबैले यसलाई प्रत्यक्ष देख्न सक्छन् । रुसको अवरोध तथा पश्चिमा देशको द्विविदाका कारण राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले सिरियाको सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैन । सुरक्षा परिषदले अहिलेसम्म गरेको महत्वपूर्ण काम भनेको युद्धविराम अनुमोदन गर्नु जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रसंघले त सिरियामा चलिरहेको युद्धमा मर्नेको संख्या पनि गन्न छोडेको छ सम्भवतः ।
स्थानीय तथा विदेशी लडाकुको सहयोग, इरानको आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग तथा रुसको हतियार तथा सहयोगमा सिरियामा राष्ट्रपति बसर अल असद सरकारले गरिरहेको दमन र विश्वले देखाएको पक्षपातीपूर्ण व्यवहारको मापन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गर्न सकिँदैन ।
अन्यायका विरुद्ध लड्दा सिरियाली नागरिक दिनदहाडै मारिएका छन्, बन्धक बनाइएका छन्, बलातत्कार र अपमानको सिकार भइरहेका छन् । कहिले बम, कहिले रसायन त कहिले गोली खान सिरियाली बाध्य छन् ।
शक्तिमा भएका राष्ट्रहरुले सिरियालीप्रति दया भाव देखाउनु भन्दा धेरै गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु युद्धरत पक्षहरुलाई संयमित हुन, सहमतिमा आउन आग्रह गर्छन् । ‘गृहयुद्ध’को संज्ञा दिएका शक्ति राष्ट्रहरुले युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने जोड दिएका छन् । उनीहरुले विदेशी सैन्य कारवाहीबाट समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् । र, यस्तैबेला विभिन्न दातृ निकायले सिरियाली सर्वसाधरण नागरिकलाई सहयोगका लागि गरिरहेको अपिल पनि सुन्न नसक्नेहरुको कानमा मात्रै परेको देखिन्छ ।
जसरी यसअघि इड्लीब र अफ्रिन बले त्यसैगरी अहिले गुटा पनि बलिरहेको छ । अब के हुन्छ ? सबैले भन्न सक्छन् किनकी गएको सात वर्षमा एउटै सुत्रको प्रयोग भैरहेको छ । नागरिकलाई बन्दी बनाइन्छ, खाद्यान्न, औषधि, अत्यावश्यक सामग्रीहरुमा नाकाबन्दी लगाइन्छ र अन्त्यमा बचेखुचेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको भनिन्छ जसले राजनीतिक चर्चा बाहेक अरु पाउन सक्दैन ।
सिरियाको युद्ध रोक्न सकिने प्रकारको थियो । अझै पनि सम्भव छ तर त्यसको लागि राष्ट्रसंघको रेस्पन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट (आरटुपी) मा निर्वाचित तथा मनोनित सदस्यहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिरियाका नागरिकको पीडा अन्त्य गर्न अहिले भइरहेका सबै प्रकारका मानवता विरोधी गतिविधि रोक्नुपर्छ सँधैको लागि । युद्ध रोक्नुपर्ने कयौँ भूराजनीतिक कारण हुन सक्छन् तर मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार भन्दा अगाडि केही आउँदैन । आफ्नो दुर्भाग्यका कारण सिरियालीहरु आफ्नो सम्मानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो मात्र हो भन्ने सोचमा बाँचेका छन् ।
जुन नैतिकता र नैतिक आचरणको बलमा प्रजातन्त्र स्थापना भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु निर्माण भएका छन्, ती सबैलाई साक्षी राखेर सिरियामा भइरहेको नरसंहार रोक्न हामी फेरि एकपटक अपील गर्छौ । युद्धविराम तत्काल लागु गर, प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत सामग्री पठाइयोस, राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर र सबै सिरियाली नागरिकलाई बाँच्न देउ ।
Professor Scott Lucas, University of Birmingham and EA WorldView
Professor Barbara Hobson, Stockholm University
Janine di Giovanni, Edward R.Murrow Fellow, Council on Foreign Relations
Dr. Muhammad Idrees Ahmed, University of Stirling
Dr. Lydia Wilson, University of Oxford
Dr. Thomas Pierret, Researcher, CNRS, France
Stanley Heller, television news host, USA
Anno Bunnik, Researcher, University of Groningen